Vaovao - Inona no maha samy hafa ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tanana lateks?
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latina dia miankina indrindra amin'ny akora samihafa sy ireo fananana miaro amin'ny vokatra samihafa. Ao anatin'ny tontolo manokana dia maratra ny mpandraharaha amin'ny fanaovana fitafiana fiarovana manokana na fiarovana tsy ampy, ary mafy ny vokany sasany.
Ny maha samy hafa ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latex
Ny fonon-tanana Nitrile no anarana mahazatra amin'ny fonon-tànana nitrile, fingotra izay akora fototra ho an'ny syntetika biolojika sy ireo mpanelanelana amin'ny fanafody. Ny fonon-tànana miaro dia ampifangaroina indrindra amin'ny acrylonitrile sy butadiene. Nitrile: kilasy fitambarana biolojika misy fofona manokana ary simba rehefa iharan'ny asidra na bases.
Ny fonon-tànana misy latsa, antsoina koa hoe fonon-tànana vita amin'ny fingotra, ny latex dia fitaovana voajanahary, nalaina avy tamin'ny tsiran'ilay hazo fingotra. Ny latex voajanahary dia vokatra biosynthetic, ary ny firafitry ny kôlônidia sy ny koloidany dia mety miovaova be matetika noho ny fahasamihafan'ny karazan-kazo, ny jeolojia, ny toetrandro ary ny toe-javatra hafa mifandraika amin'izany. Amin'ny latsa-bato vaovao tsy misy akora simika, 20- 20% fotsiny ny totalin'ny hydrocarbons vita amin'ny fingotra, ny ambiny kosa dia singa kely tsy misy fingotra sy rano. Anisan'ireo singa tsy misy fingotra ny proteinina, ny lipida, ny siramamy ary ireo singa tsy miorina, izay mamorona firafitra mitambatra miaraka amin'ny vongan-tsiranoka ary mitroka amin'ny ampahany amin'ny poti na mamorona potika tsy vita amin'ny fingotra.
(2) Toetra mampiavaka azy
Ny fonon-tànana Butyl dia mafy, tsy dia mihetsika, fanoherana ny abrasion tsara kokoa, fanoherana asidra sy alkaly (ny fonon-tànana butyl tsy afaka misoroka acétone, toaka mahery), anti-static, ary tsy mamokatra allergy amin'ny hoditra, mety ho an'ny allergy-prone sy ela. mitafy.
Ny fonon-tànana misy latabatra raha oharina amin'ny fonon-tànana nitrile, ny fanoherana henjana ary ny fanoherana dia ambany kely kokoa, saingy ny elastika tsara kokoa, ny fanoherana ny abrasion, ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly, ny fonon-tànana ary ny nitrile raha oharina amin'ny ratsy kely kokoa, ny fanoherana ny asidra sy ny alkaly dia somary tsara kokoa noho ny nitrile, saingy tsy mety amin'ny hoditra mahazaka alika sy akanjo maharitra.
Tombony sy fatiantoka amin'ny fonon-tànana nitrile sy fonon-tànana latina
Nitrile fonon-tànana NBR, fonon-tànana nitrile fingotra sentetika, ny singa lehibe indrindra amin'ny acrylonitrile sy butadiene. Ny tombotsoan'ny fonon-tànana nitrile dia tsy mahazaka, manimba, afaka manampy loko, loko marevaka kokoa; ny fatiantoka dia ny tsy fitoviana matevina, ny vidiny dia avo noho ny vokatra latématika, ny akora nitrile dia tsara lavitra noho ny simika latina sy ny asidra ary ny fanoherana alkali, ka lafo io.
Ny fitaovana vita amin'ny fonon-tànana dia misy latex voajanahary (NR), ny tombony dia ny elastika tsara, azo simbaina; fatiantoka dia ny olona sasany mahazaka fanehoan-kevitra mahazaka.
Fampidirana fonon-tànana vita amin'ny fingotra nitrile.
Ny fonon-tànana vita amin'ny nitrika dia anisan'ny karazana fonon-tànana fiarovana amin'ny simika, ny tena fotony dia ny fingotra, misy acrylonitrile sy butadiene. Nitrile (jīng): kilasy fitambarana organika misy fofona manokana mety lo rehefa tratry ny asidra na fotony. Ny fonon-tànana vita amin'ny nitrika mahomby dia mifangaro tsara amin'ny tanjaka mekanika sy ny fanoherana simika.
Misy andiam-panary azo ovaina, tsy mitongilana ary miaraka amina vokatra samihafa, ny fonon-tanana dia azo zaraina ho karazana vovoka sy tsy vovoka roa koa, ny hateviny manomboka amin'ny 0,08 ka hatramin'ny 0,56mm, ny halavany dia 24 ka hatramin'ny 46cm. fonon-tànana vita amin'ny nitrile eo am-pamolavolana fitaovana manohitra static manokana (lakaoly) hahatratrarana ny fepetra takiana amin'ny fanatanterahana fanoherana ny static, raha tsy misy alergie proteinina kosa ny firafitra, ny fonon-tànana vita amin'ny nitrile rehetra amin'ny olombelona Tsy misy fihetsika mahazaka ny hoditry ny olombelona. 1.
1. fanoherana simika miavaka, manohitra ny asidra sy ny alikaola, ny solvents, ny solika ary ny zavatra manimba hafa mba hanome fiarovana simika tsara. 2.
2. fananana ara-batana tsara, toetra tsara fanoherana ny ranomaso, anti-puncture, toetra fanoherana ny fikorontanana. 3.
3. fomba mampahazo aina, araka ny endrika ergonomika an'ny milina palma fonon-tànana manenjana ny rantsan-tànana mba hahatonga azy ireo hitafy akanjo sy ahazoana mivezivezy amin'ny rà.
4. tsy misy proteinina, fitambarana amino ary akora manimba hafa, mahalana vao miteraka allergy. 5.
5. fotoana fohy fanimbana, mora raisina, ankasitrahana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. 6.
6. tsy misy singa silikika, manana fahombiazana manohitra ny static, mety amin'ny filan'ny famokarana indostrialy elektronika. 7.
7. Sisa simika ambany ety ambonin'ny, atiny ambany ionic ary atiny potika kely, mety amin'ny tontolon'ny efitrano madio madio.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny sakafo (akoho amam-borona, hena, fikarakarana vokatra vita amin'ny ronono), fanadiovana ao an-trano, indostrian'ny elektronika (board circuit, semiconductor ary asa hafa), indostrian'ny petrochemical, indostrian'ny fitsaboana sy fahasalamana, sns.
Aorian'ny fampiasana dia mila manao asa tsara ianao amin'ny fanodinana ireo fonon-tànana mba hanamorana ny famerenana sy fampiasana indray ny fonon-tànana.
1. Aorian'ny fanadiovana dia ampiasao kitapo madio na boaty voaisy tombo-kase ho an'ny fitehirizana mba hisorohana ny fandotoan'ny vovoka sy ny puncture amin'ny zavatra maranitra.
2. Atao amin'ny toerana misy rivotra sy maina mba hialana amin'ny fonon-tànana mavomavo ateraky ny fiparitahan'ny hazavana.
3. Ario ireo amin'ny fotoana voalohany, toy ny fonosana sy ario na fanodinana sy fanadiovana fanamiana.